एक रमाईलो होली पार्टी कसरी गर्ने! - छाला
एक रमाईलो होली पार्टी कसरी गर्ने!
How Have Fun Holi Party
होली उत्सवको आनन्द लिन को लागी पछाडि जान चाहँदैन? दिनभर नाच गर्दै कलर- र पानीमा भिजेको लुगा आफ्ना साथीहरूसँग भोज खाँदै गर्दा gujiyas र दही भल्लास र चिसो संग यसलाई धुने थाण्डाई हामी सबै कसरी र colors्गको चाड मनाउँदछौं। तर दुर्भाग्यवस, महामारीको कारण, होली पार्टीहरू धेरै शहरहरूमा रद्द गरिएको छ र सार्वजनिक स्थानहरूमा जनसमूहको पनि अनुमति छैन। तर त्यसले तपाईंको आत्मालाई नलिनु हुँदैन किनभने त्यहाँ धेरै रमाईलो र सुरक्षित तरिकाहरू छन् जसमा तपाईं कुनै चीजको बारेमा चिन्ता नगरी उत्सव मनाउन सक्नुहुन्छ।
नयाँ सामान्यमा पनि तपाईले पहिले जस्तै धेरै रमाइलो होली पार्टी पाउन सक्नुहुनेछ, केवल यसलाई परिवर्तन गर्नुहुने केही परिवर्तनहरू सहित!
१ घरमा सुरक्षा
दुई भर्चुअल जानुहोस्
3 स्वयं हेरचाह
चार के लगाउने
।। खाना खानु
। प्रायः सोधिने प्रश्नहरू
हालको परिदृश्यको साथ, बाहिर नछाड्नु र घरमै बस्नु नै सबैभन्दा समझदार योजना हो। COVID का केसहरूको संख्या बढ्दो छ, र भीडमा जानु, मास्क लगाएर पनि, एउटा ठूलो जोखिम हो जुन हामी आफ्नो र आफ्नो परिवारको सुरक्षाको लागि लिन चाहँदैनौं। त्यसले भन्यो, हामी कसरी अझै होलीको आनन्द लिन सक्छौं? होली पार्टीको मजा लिन हामीसँग ठूलो भीड हुनु आवश्यक पर्दैन। तपाईं आफ्नो परिवारको साथ तपाईंको वरिपरि मात्र रमाइलो गर्न सक्नुहुन्छ। ती रंगहरू प्राप्त गर्नुहोस् - छाला सुरक्षित मानिसहरू - पकाउनुहोस् होली विशेष मिठाईहरु र प्यारी खाना, केहि रमाईलो नृत्य संख्या मा राख्नुहोस् र मजा!
प्रो प्रकार: तपाईले आफ्नै भान्साको सामग्री जस्तै हल्डी र मसला मसला पाउडरहरू पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ वा फूलहरूसँग होली खेल्न सक्नुहुन्छ।
यो केवल कार्यालय बैठकहरू होइन जुन भर्चुअल हुनुपर्दछ। भर्चुअल पार्टीहरू अब पूर्ण रूपमा एक चीज हो, र होली पार्टी अनलाइन मनाउनु ठीक त्यस्तै स्वीकार्य छ। यस पार्टीको दुई संस्करणहरू हुन सक्छन् - एउटा हो उनीहरूको कम्पनीहरूले उनीहरूका कामदारहरूको लागि र अन्य परिवार र मित्रहरू बीच। यहाँ दुबैलाई हेरिरहेको छ ...
अफिस होली पार्टीको लागि, तपाइँ बोर्डमा एक जुम्बा प्रशिक्षक राखेर रमाईलो होली गीतहरू नाचेर एक रमाइलो ज़ुम्बा सत्र आयोजित गर्न सक्नुहुनेछ। यो निश्चित रूपमा सँगै रमाईलो गर्न र केहि होली मिठाई क्यालोरी जलाउने एक उत्तम तरिका हो। अर्को चाखलाग्दो भर्चुअल होली विचार केहि खेलहरू आयोजना गर्नु हो जुन तपाइँ सबैले रमाईलो गर्नुहुनेछ। तपाईं खेल्न सक्नुहुन्छ किशोर प्याटी वा हौसी वा प्रतियोगिताहरू जस्तै जो एक मिनेटमा सबैभन्दा धेरै बर्फीहरू खान्छ!
अर्को चाखलाग्दो विचार तीन चारवटा रमाईलोको साथ रहस्य बाकस बनाउने र तपाइँको सहभागीहरूमा उनीहरूलाई पठाउने हुन सक्छ। र त्यस पछि सबैले बक्सु भर्चुअल रूपमा खोल्न र निश्चित समयावधिमा ती सामग्रीहरूबाट एक डिश बनाउँदछन्। जहाँसम्म, हामी तपाईंलाई सुझाव दिन्छौं कि तपाईं के गर्न चाहानुहुन्छ निर्णय गर्नुहोस् र आफ्ना सहभागीहरूलाई पनि सोध्नुहोस् कि उनीहरूलाई विचार मनपर्दछ कि भनेर र यदि सबै जना यससँग ठीक छ भने, तपाईं अघि बढ्न सक्नुहुन्छ।
साथीहरू र परिवारसँग एक होली पार्टीको लागि, अनलाइन आउन र भिडियोमा जानको लागि साझा समय सेट गर्नुहोस्। पार्टी अघि, एक मा निर्णय गर्नुहोस् भाँडा को एक जोडी सबैले बनाउन वा खरीद गर्न सक्दछन् ताकि सबै भर्चुअल पार्टी सहभागीहरूमाझ बीच एक समान लि link्क छ। ड्रेस कोडमा पनि निर्णय गर्नुहोस्! खेलहरू खेल्नुहोस्, नाच्नुहोस्, कराओके गाउनुहोस् वा अन्ताक्षरी / गूंगा चराहरू खेल्नुहोस् ... यो यति रमाइलो हुनेछ! तपाईं अधिक खेल विचारहरूको लागि पनि अनलाइन खोजी गर्न सक्नुहुन्छ वा रचनात्मक प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नै खेलको साथ आउन सक्नुहुन्छ।
प्रो प्रकार: हालको अवस्थाको बारेमा निरन्तर कुराकानी गर्न कोसिस गर्नुहोस् र सट्टा राम्रो कुराकानी र छलफल गर्नुहोस्। याद राख्नुहोस् कि विचार भनेको तपाईका प्रियजनहरूसँग खुशीसाथ समय बिताउनु हो र यसलाई अविस्मरणीय अवसर बनाउनु हो।
एक पार्टी - भर्चुअल वा शारीरिक - यसको मतलब तपाईले पोइन्टमा हेर्नु पर्छ। तपाईं सलुनमा अपोइन्टमेन्ट अनुसूची गरेर र तपाईंको मनपर्ने मैनीक्योर पेडीक्योर रुटीनमा काम गरेर सुरू गर्न सक्नुहुन्छ वा हेयर स्पामा लिप्त हुन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईं एक सलुन भ्रमण गर्न सशंकित हुनुहुन्छ भने, त्यसो भए तपाईं आफैले आफ्नै घरमा आरामदायी DIY म्यानिक्योर वा हेयर स्पा गर्न सक्नुहुनेछ। यो विचार तपाईको आफ्नै लाडमा छ। साथै, निश्चित गर्नुहोस् कि तपाई मात्र पाउनुहुन्छ जैविक रंग ती मा शून्य रसायन छ।
प्रो सुझाव: तपाईंको छालाबाट बच्न र कपाल होली रंगहरु संग धेरै गन्दै देखि - जो एक स्थायी प्रभाव गर्न सक्छ - तेल तपाईंको छाला र कपाल पहिले यसले तपाइँको छाला र कपाल र तपाइँमा राख्नु भएको रंग बीचमा एक लेयर प्रदान गर्दछ।
छवि: सुकृति र आकृति
केवल किनभने तपाईं आफ्नो नजिकको र प्रियको भेट्न जाँदै हुनुहुन्न भनेको यो होइन कि तपाईंले उत्सव मनाउनुहुन्छ र पजामामा दिन बिताउनुहुन्छ। जुन हामी सबैले पाइसकेका छौं, हामी सबै आफ्नो लागि धेरै आवश्यक समयको हकदार छौं र महिनौं पुरानो पसिनाको पल the्गमा बिताएपछि हामी सबैले हाम्रो पहिरनमा केही प्रयासहरू गर्न सक्थ्यौं। यस अवसरलाई बाहिर ल्याउने एउटा बहानाको रूपमा सोच्न यो हामीलाई धेरै नै राम्रो हुन्छ चाडको लुगा हाम्रो कोठाको पछाडि गाडिएको।
छवि: वेदिका एम १
यदि तपाइँसँग भाग लिन भर्चुअल होली पार्टी छ भने, तपाइँ योजना गरिएको गतिविधि अनुसार पोशाक गर्न सक्नुहुनेछ। यदि यो तपाइँको लागि खेल दिन हो भने, तपाइँ एक उज्जवल र रंगीन टाई डाई काफ्तानको छनौट गर्न सक्नुहुनेछ जुन तपाइँको दिनमा खर्च गर्न वा यो एक जुम्बा वा कसरत थीम्ड पार्टी हो भने, तब तपाईं र colorful्गीन जोगर र सेतो लगाएर फ्लर्ट फेमिनाइनसँग खेलकुद मिलाउन सक्नुहुनेछ। डिजाइनर वेदिका एम द्वारा माथिको पोष्ट जस्तै बलून आस्तीनको साथ क्रप शीर्ष।
छवि: गुलाबो जयपुर
प्रो प्रकार: तपाईं परम्परागत मार्ग लिन सक्नुहुनेछ र ब्रान्ड गुलाबो जयपुरद्वारा यस जस्तो सबै सेतो पोशाकको लागि अप्ट इन गर्न सक्नुहुनेछ। सेतो बाहिर निकाल्नुहोस् बनाउन र यसलाई oxidised गहना संग जोडी!
कुनै चाडपर्व विशेष स्वादिष्ट पदार्थहरू बिना पूर्ण हुँदैन र होली पनि फरक हुँदैन। रंगहरू निस्सन्देह फेस्टको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हुन् तर खाना नजिकै दोस्रो आउँदछ। यहाँ आईटमहरूको सूची छ जुन होलीको बखत तपाईंले खानुपर्दछ:
गुजिया: होलीको पर्व बिना अपूर्ण छ gujiyas किनकि तिनीहरू क्लासिक होली स्टेपल नै रहन्छन्। गुजियास क्रिस्पा, फ्लाकी पेस्ट्रीहरू हुन् जुन मिठो भरिपूर्ण सामग्रीको साथ खोया र सुकेका फलहरू। तपाईं लोकप्रिय आइटम फ्राइड वा बेक्ड स्वाद गर्न सक्नुहुन्छ।
थाण्डाई: तपाईं होलीको सोच्न सक्नुहुन्न सबै पेय पदार्थले राम्रोसँग मनपराएको उल्लेख गरेर, थाण्डाई । Thandai एक भारतीय चिसो पेय पदार्थ हो जुन सुक्खा फल, बीउ, गुलाबका फूलहरू, दुधको अन्य चीजहरूको मिश्रणको साथ तयार हुन्छ। यदि तपाईं बाहिरी सेवाहरू मन पराउनुहुन्न भने, तपाईं जहिले पनि फरक रेसिपीहरू अनलाइनको मद्दतले आफ्नै ताजा बनाउन सक्नुहुन्छ।
पूरान पोली: यदि तपाईं महाराष्ट्रको हुनुहुन्छ भने, तपाईंलाई त्यो थाहा छ पूरान पोली होली को समयमा एक आइटम हुन पर्छ। सफाया एक भारतीय मीठो फ्लडब्रेड हो। यो सुपर बनाउन को लागी सजीलो छ र यत्तिको गहन।
जीनियस भडा: जीनियस भडा दहीमा दाल पकाउँदछ भने मिठो र खट्टा चटनीको साथ। यसलाई पनि सन्दर्भ गरिएको छ दही भल्ला देशको उत्तरी भागमा र होलीको पर्वको समयमा एक लोकप्रिय खाद्य वस्तु हो।
को आराम मा मजा लिन यो सुपर सजीलो छ तपाईको आफ्नै घर । तपाईं सबै थोरै रचनात्मकता र उत्साहको लागि आवश्यक छ र तपाईं यो वर्षको लागि एक ठूलो होलीको लागि तयार हुनुहुन्छ।
Q. किन होली मनाईन्छ?
TO होली खराबीमा राम्रोको जीत दर्शाउँछ। मुख्य दिन, साँझमा, काठको एक आगो जलाइन्छ - दुष्ट होलिकाको जलेको अर्थ। आगोलाई केहि खानेकुरा र चामल फ्लेक्सहरू खुवाइन्छन् जबकि मानिसहरू आगोका उत्सवहरूमा आनन्द मनाइरहेका छन्। अर्को दिन, होली - यसको रंगीन रूप मा - मनाइन्छ। यो भनिन्छ कि एक लाई यस दिनमा बाइगोन हुन दिनुहोस्, र माफ गर्नुहोस् र भुल्नुहोस्।
Q. होली मिठाईहरू घर बनाउन सजिलो छ?
TO होलीका केही पकवानहरू अति सजिलो हुन्छन् जबकि अरूहरू अलि गाह्रो हुन्छन्। यद्यपि तपाईं भर्चुअल होली फूड वर्कशपमा भाग लिन सक्नुहुनेछ र यी चीजहरू कसरी सजिलोसँग बनाउने भनेर जान्नुहोस्। वा अझ राम्रो, मात्र टाउको खाद्य खण्ड Femina.in मा र तपाइँ क्रमबद्ध हुनेछन्।
कसरी अनुहारको कपालबाट प्राकृतिक रूप बाट छुटकारा पाउने
पुस्तकालय महिला को लागी उत्तम अनुकूलता
pcos कपाल झर्ने घरेलु उपचार
अनुहारको कपाल हटाउनका लागि घरेलु उपचार
स्कूलको बारेमा प्रख्यात उद्धरणहरू